Haugone Bvisa Mapurogiramu pane iPhone muIOS 14? Heino iyo Gadzirisa
Iyo yakajairika nzira yekubvisa maapplication pa iPhone iri nyore uye yakatwasuka. Nekudaro, iwe unogona kupinda mune zvisingadiwe nyaya dzimwe nguva, zvichikonzera dambudziko nekudzima maapplication. Takaona vashandisi veIphone vakati wandei vachinyunyuta kusawana sarudzo yekudzima maapuro paIOS 14. Kana usingakwanisi kubvisa mapurogiramu pa iPhone yako inoshandisa iOS 14, tevera kugadzirisa pazasi. Related | Mawaniro eMapurogiramu Akavanzika pa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Haugone Bvisa Zvirongwa pa iPhone mune iOS 14? Heino iyo Gadzirisa
Mapurogiramu Asiri Kuvandudza pa Android 10? Heano Maitiro Ekugadzirisa
Vashandisi veApple 10 vanogona kazhinji kusangana nenyaya yakajairika uko maapps asingazoregedze kana kugadzirisa parunhare. Izvi zvinogona kunetsa zvakanyanya, kunyanya kana dambudziko rikaramba richireba kupfuura zvakajairwa. Kana iwe uri kutarisana neyakadai nyaya, usanetseke- isu tapfuura nematanho ese anokwanisa matanho ayo achakubatsira iwe kugadzirisa matambudziko uye kugadzirisa dambudziko. Pazasi pekuti unga gadzirisa sei maapplication asiri kugadzirisa nyaya pa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Apps Kwete Kuvandudza pa Android 10? Heano Maitiro Ekugadzirisa
Imwe yemabhenefiti eTimu ndeyekuti chikuva chinopa mhinduro yakasimba yekuitisa nhare dzemusangano uye kubatana. Asi mukati megore rapfuura, chikumbiro chave chiri chechipiri-kirasi mugari kune imwe, asi yakakurumbira mamiriro, misangano inongoitika. NemaTimu nhasi, kana iwe uchida kuronga musangano, unoenda kukarenda tebhu, tinya 'Musangano Mutsva', ... [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft Inowedzera 'Sangana Izvozvi' kune Matimu asi Zvinoda Kuenda Nhanho Imwe Kuwedzera
PDF yakakurumbira, inochinjika uye yakachengeteka faira fomati yekugovana magwaro online. Nekudaro, zvinogona kunetsa kuona uye kugadzirisa faira rePDF pasina application chaiyo. Sezvineiwo, kune akawanda ePDF edhita anowanikwa kuti akubatsire kugadzirisa zvikanganiso pane yakakosha gwaro, zadza mafomu, wedzera siginecha kuchibvumirano, shandura mifananidzo nezvimwe. Mamwe emaapps aya nde… [Verenga zvakawanda ...] nezve The 6 Best PDF Editors ye Windows 10 muna 2021